လူမှုရေး၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ဗွီဒီယိုကင်ပိန်းအသုံးပြုမှုကိစ္စ - Moe ၏အနောက်တောင်ကင်
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 4, 2011 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 27, 2011 Douglas Karr
ငါသိလျှင် မိုးရဲ့အနောက်တောင်ကင် ရှိခဲ့တယ် ကခုန်ဗီဒီယိုပြိုင်ပွဲ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ နဲ့ - ငါကတစ်ဆင့်မြှုပ်နှံခဲ့ဖူးတယ် desktop ယိုဗီဒီယို သူတို့အတွက်ပဲ!
ငါကဒီကင်ပိန်းကိုအကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်နဲ့ကြိုက်တယ်။ အေဂျင်စီ မင်္ဂလာပါ ဝယ်လိုအားကိုဖန်တီးရန်မလိုအပ်ခဲ့ပါ။ သူတို့မဟာဗျူဟာကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးစားသုံးသူများကအလုပ်လုပ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့်မြှင့်တင်ရေး။ ဒါဟာဗီဒီယို ... ထိုကဲ့သို့သောသော့ချက်အလတ်စား ... နှင့်လူမှုရေးပေါင်းစပ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းပါတယ်။ ထိုအများထဲမှအများစု - ကပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤကြမ်းတမ်းသောစီးပွားရေးကာလတွင်၊ ငါတို့ပျော်ချင်တယ်.
ရလဒ်အဖြစ်ကောင်းစွာသော့ချက်ပါ! ဗီဒီယိုတင်ပြချက် ၁၃၂ ခုသာရှိလျှင်သင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည်အစီအစဉ်အတိုင်းမလုပ်ဆောင်နိုင်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သို့သော်ထိုတင်ပြမှု ၁၃၂ ခုက ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၉၄၇ Facebook ရှယ်ယာများ
တစ်ဝက်ကျော်သုံးစွဲသူများကိုရောက်ရှိ ဖြတ်. သူတို့ရဲ့ကွန်ယက်ဟာသတင်းကိုထုတ်လွှင့်ဖို့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ မိုးအမှတ်တံဆိပ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကြီးမားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အချို့သောရှေးရှေးများကိုမောင်းထုတ်ရန်နှင့်မေးခွန်းအချို့ကိုဖမ်းယူနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ Mmmm ... မေးခွန်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dance Your Queso Off ဗီဒီယိုပြိုင်ပွဲသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ guests ည့်သည်များအား Moe's Queso ကိုချစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်စိတ် ၀ င်စားစရာနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပရိသတ်တွေအတူတူစုဝေးကြတာကိုကြည့်ရတာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲမှာငါတို့ကဲ့သို့ our ည့်သည်များပျော်ရွှင်မှုများစွာခံစားခဲ့ရလိမ့်မည်။ Moe ၏အနောက်တောင်ကင်များအတွက် PR / Corporate Communication ၏ဒါရိုက်တာ Lauren McGowen Barash ။
သြဂုတ် 5, 2011 မှာ 12: 23 AM
ကောင်းတယ် အနိုင်ရသူသည် Ferris Bueller's Day Off တွင် Cameron Frye နှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသည်။